Akanakisa Salman Rushdie Mabhuku | Zvazvino Zvinyorwa
Akazvarwa mwedzi miviri rusununguko rweIndia risati rasvika, chimiro chaigona kukurudzira rimwe remabasa ake ane mukurumbira, Salman Rushdie ((Bombay, 1947) Vanyori vane mukurumbira muIndia uyezve, rimwe remakakatanwa makuru ezana ramakore rechi1988. Kutambudzwa kubvira XNUMX ne ayatollah Iranian Ruhollah Khomeini, uyo aifunga bhuku rake rinonzi The Satanic Verses semhosva inopesana neIslam, Rushdie apedza makore makumi matatu ari pakati pechiedza nerima, achienderera mberi neruzivo rwemashiripiti neakasarudzika anowanzo kufurirwa nemashiripiti uye kuti tinoongorora kuburikidza zvinotevera akanakisa Salman Rushdie mabhuku.
1 Vana vepakati pehusiku
3 Ndima dzaSatani
4 Harún uye gungwa rengano
5 Kupera kwekupedzisira kweMoor
6 Pasi pasi petsoka dzako
7 Shalimar uyo anosekesa
8 Iyo enchantress yaFlorence
Vana vepakati pehusiku
Ichokwadi chekuzvarwa mwedzi miviri zvisati zvaitika rusununguko rweIndia Izvo zvakatendera Rushdie kuona shanduko muIndia ichiri yakakamurwa pakati petsika neazvino, pakati peMadokero netsika yayo. Kufungidzira kwaizoguma Vana vepakati pehusiku, bhuku yakaiswa mukati mehusiku hwaAugust 15, 1947, iro zuva iro India yakava nyika yakazvimiririra uye iyo nguva yekuzvarwa kweSaleem Sinai, protagonist uye murondedzeri kuburikidza nehupenyu hwaiye isu tinozivawo nguva dzinokosha dzezvematongerwo enyika dzerudzi rwake. Iri bhuku, iro rakava chinhu chekutengesa mushure mekuburitswa muna 1981, akakunda Booker Prize uye iyo James Tait Nhema Mubairo.
Vatsoropodzi vazhinji vakaitisa nhumbu Nyadzi mushure mekuburitswa kwayo muna 1983 sebasa risingarondedzerwe asi richidikanwa, rakanyanyisa kupindwa muropa. Set in Peccavistan, inofungidzira nyika dzimwe nguva iri kure nezvazviri, Nyadzi inhamo umo nyaya dzevanhu vakasiyana vanoratidzwa nekunyadziswa dzinoitwa, kubva kuna Omar Khayyam, mwanakomana wavanaamai vatatu, kuna General Hyder nedivi rake rakakura rerima. Imwe ye engano dzinonyanya kuda kuziva naRushdie.
Kunyange i mashiripiti echokwadi Chaingove chiratidzo cheLatin America zvinyorwa.Vamwe vanyori veIndia vakaita saArundhati Roy naSalman Rushdie vakamboishandisa mumabasa umo chokwadi uye fungidziro zviri nyore kusangana. Muenzaniso wakanaka Ndima dzaSatani, naiye bhuku raRushdie rinonyanya kupokana. Iyo inoverengeka inotaurira nyaya yevaviri vatambi vemuHollywood, Gibreel Farishta naSaladin Chamcha, vane ndege inotorwa nemagandanga, zvichiita kuti vawire mugungwa. Mushure mekupona, vese vatambi vanoona zviono zvinovaendesa kune maonero evamwe vanhu, senge weiyo muporofita wechidiki wechiIndia Ayeesha, kana vhezheni yaMuhammad iyo inosanganisira kupindirana muKoran. Iyi nyaya yekupedzisira haina kufadza ruzhinji rwevaMuslim, kunyanya nyika iri muIraq ine mutungamiriri wechitendero, Ayatollah Ruhollah Khomeini, akaraira kufa kwemunyori mushure mekuburitswa kwebhuku muna 1988. Parizvino, iyo fatwa (kana mutongo) pamusoro paRushdie achiri kushanda, anga anosvika mamirioni 2.8 emadhora.
Harún uye gungwa rengano
Rushdie akaburitsa iyi seti yemaakaunzi muna 1990, mwedzi 19 mushure mekuvanda kuseri kwe fatwa kwaakatongerwa mushure mekubudiswa kweThe Satanic Verses Nguva dzakaoma umo munyori akanyora bhuku iri kumwanakomana wake Zafar, achitenderera mafomu matsva erondedzero yevana kuburikidza nemazwi aRashid Khalifa, munyori wenhau akanakisa uyo, kubva rimwe zuva kusvika rinotevera, anorasikirwa nemukana wekuramba achitaura. Chivhariso chaachaedza kukunda achibatsirwa nemwanakomana wake, Harún, uyo anomubatsira kuti adzokerezve kugona kwake. Kufungidzirwa sechirevo chemamiriro ezvinhu akaomarara ayo munyori aive achidarika uye kufungidzira kwemwanakomana wake, mukadzi wake uye imba yemhuri, Harún uye gungwa rengano ingangove imwe ye Mabhuku aRushdie akanyanya kwazvo, yakakodzera vateereri vese.
Kupera kwekupedzisira kweMoor
Inofungidzirwa nevazhinji kuve rimwe remabhuku ake akanakisa, Kugomera kwekupedzisira kweMoor, rakaburitswa muna 1995, rinotaura nyaya yenhengo yekupedzisira yemhuri yeZogoiby, Moraes el Moro, uyo anobva muguva rake anorondedzera hupenyu hwemhuri yake. Iye protagonist, murume anokwegura pamhanyisa yekumhanya kupfuura vamwe vese vanofunga anode kusvika kuhunhu hwepasi uye kusagadzikana kwenzanga kwenyika ine mhirizhonga seIndia asiwo kune rudo nemutsa unobuda kubva kune hunhu hunodzoka kubva pazviitiko zvenguva ino India kusvika pakuvepo kwekupedzisira mambo wechiMoorish weSpain.
Pasi pasi petsoka dzako
Yakagamuchirwa se vhezheni yengano yaOrpheus naEurydice, Pasi pasi petsoka dzako inotaurira nyaya yaVina Apsara, muimbi wechidiki ane izwi remusango rinodikanwa nevarume vaviri: Ormus Cama neshamwari yake, mutori wemifananidzo Rai, anovawo murondedzeri wenyaya. Iyo novel inoiswa panguva iyo dombo yakasvika pakakwirira kwayo, saka rungano rune mareferenzi akawanda kumhando iyi panguva imwe chete yekuti iko kushoropodza kubatana uku kusingabviri pakati peEast neWest. Iyo novel yakaburitswa muna 1999.
Shalimar uyo anosekesa
Rakaburitswa muna 2005, Shalimar uyo anoteedzera anotaurisa mhedzisiro inokatyamadza yerudo kuburikidza nemeso e protagonist, gandanga anozvidaidza Shalimar uyo anosekesa. Mutyairi mumwechete wechiMuslim uyo, mamwe mangwanani muna 1991, akauraya aimbova mumiriri weIndia uye mukuru wehugandanga weUS Maximilian Ophuls. Dambudziko rinotanga apo kuferefetwa kunowana mavambo echinangwa chisiri nyore kwazvo umo kuzivikanwa kwemwanasikana waOphuls kunowanikwa sewaimbova mudiwa waSharimar paaishanda sediplomate muKashmir yainetsa.
Iyo enchantress yaFlorence
Hwechokwadi humbowo hwebasa rakanaka raRushdie rekushandura mazwi kuita mashiripiti, Iyo enchantress yaFlorence inodzokera kumashure ezviitiko zvekare kupfuura izvo zvakajairwa nemunyori. Zvikurukuru, zvinotitora kuenda kudare re Akbar the Great, chivako chehumambo hweMughal, muguta reIndia reFatehpur Sikri pakupera kwezana ramakore rechi 2008, nguva umo hondo dzakasiyana dzaizotsanangura India senyika yaizoitika. Chikamu chinokanganiswa nenyaya yemurume anouya kudare, imwe yemukadzi akanaka uye neizwi rinokwezva rine zvipo zvikuru zveuroyi. Rimwe remabhuku ake akanakisa rakaburitswa munaXNUMX.
Ndezvipi zvako Mabhuku akanakisa aSalman Rushdie?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Akanakisa Salman Rushdie mabhuku